Maalinta: Abriil 16, 2019
Nalalka Nalalka, LV-MV iyo Qalabka Dayactirka ee Hooseeya
Kayas (marka laga reebo) Isweydaarsiga (oo ay ku jiraan) inta u dhaxaysa Mashruucyada Kcep Qaybta I-II Mashaariicda Iftiiminta, Ag-og iyo Qalabka Hawsha ee Hadda Soo Baxay iyo Shaqada Cusboonaysiinta Dhismaha iyada oo ah Natiijada Tender TC State Railways [More ...]
Manisa-Balıkesir, Manisa-Uşak, Alsancak-Denizli Line Qalabka Korantada
Manisa-fishesir, Manisa-butler, Alsancak-Denizli Line Light Dayactirka Dayactirka Dayactirka ee Saldhigyada taas oo ay sabab u tahay Qandaraasyada Jamhuuriyada Turkiga ee Tareenka 3. 2019 / 131807 GCC xadka ee Adeegga Iibsiga iyo Maaraynta Maareynta Adeegga Suuqa (TCDD) [More ...]
Mashruuca Tareenka Kowaad ee Tigidhka Tigreega ayaa la sameeyey mashruuca tareenka Dar es Salaam-Morogoro
Xarunta Dhismaha Dar Es Salaam - Mashruuca Morogoro (DSM), oo aad muhiim ugu ah howlaha superstructure-ka ee alxanka tareenka, 14 Abriil 53 + 635'te xafladda ayaa billowday bishii Abriil. Munaasabad Lagu Shaqeynayay Tansaaniya, [More ...]
Mustaqbalka Duulista Rayidka
Wasiir ku xigeenka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Kulan isuduwid ah oo madani ah ayaa lagu qabtay gudoomiye ku xigeenka Fmer Fatih Sayan iyadoo ay ka soo qeyb galeen maamulayaasha shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha la xiriira iyo ururada ku sugan magaalada Istanbul. 15 Machadka Duulista Rayidka ee Turkiga [More ...]
Waqooyiga Marmara ayaa laga furayaa 2020
69 ee Shirka Maareeyayaasha Gobollada oo sanad walba la qabto tan iyo markii la aasaasay Ururka Wadooyinka Waaweyni waxaa lagu bilaabay xafladdii furitaanka ee lagu qabtay Isniinta Abriil Halil Rıfat Paşa Hall ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka. Gaadiidka iyo Xafladaha [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qabtay kulan ku saabsan artırma kordhinta kaydinta iyo dakhliyada iyada oo ay weheliso shaqaalaha sare, oo ay ku jiraan maamulka sare ee Wadooyinka, PTT iyo Gaadiidka TCDD. Intii uu socday kulanka, buundada, wadada weyn iyo tigidhada tareenka ayaa sidoo kale laga hadlay. [More ...]
Shirkadda Isgaadhsiinta ee Izmir ayaa heshay Hantidhowrka Taariikhda Korantada Taariikhda
Tallaabada ugu muhiimsan ayaa laga qaaday aragtida Duqa Magaalada İzmir Duqa Magaalada Tunç Soyer si loo keeno Warshadda Korantada Taariikhiga ah magaalada. Qandaraasyada gaarka loo leeyahay ayaa maanta lagu qabtay Ankara. [More ...]
Maalin kasta, celcelis ahaan 10 kun oo qof ayaa ku safra jidka tareenka Batman-Diyarbakır, kaas oo lagu bilaabay baahida loo qabo bixinta gaadiid raqiis ah, xawaare badan oo la isku halleyn karo tareen. Baahan ayaa ka jira qaybaha kala duwan ee bulshada [More ...]
TCDD Stand wuxuu noqdey mid raaxo leh oo ah riwaayada wadiiqadii Eurasia
Turkey kaliya oo 3 ee dunida ugu weyn. TCDD waxay fure u furtay Raysimaş iyo DATEM markii ugu horeysay Eurasia Rail 2019, Tareenka Caalamiga ah iyo Nidaamka Tareenka Fudud iyo Bandhiga Saadka [More ...]
Jihada iyo Saxeexyada Saxeexa Cusboonaysiinta Degmada Ahmetli ee Manisa
Dowladda Hoose ee Manisa, si loo hubiyo amniga taraafikada iyo muwaadiniinta inay gaaraan qodobbada la doonayo ee fudud ee degmada Ahmetli waxay dib u cusbooneysiisay jihada taraafikada waxayna saxeexeen taarikada. Muwaadiniintu waxay ku sii wadi karaan gaadiidkooda si nabdoon oo raaxo leh [More ...]
bacdi Madaxtooyada ee Istanbul degmada Metropolitan ayaa sidoo kale soo abaabulay oo taageero ka "Madaxweynaha Baaskiil Tour ee Turkey" s 55. Madaxweynaha IMA Mevlüt Uysal iyo Gudoomiyaha Magaalada Istanbul Ali Yerlikaya ayaa Bilaabey bilowgooda. Laga bilaabo Fagaaraha Sultanahmet iyo adduunka [More ...]
Havas ayaa ku kordhay labo mitir oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Havas oo ka mid ah noocyada muhiim ugu warshadaha hawada Turkey ah, 40.000 wadar ahaan mitir murabac oo idaacadda iyo helaa dhismayaasha kaydinta ku meel gaar ah la meel gudaha iyo dibadda, xafiisyada adeegi, workshops dayactirka qalabka iyo meelaha baabuurta la dhigto oo la Istanbul [More ...]